अपराध Archives - RoadMapNews
गोली हानेर छोपियो लागुऔषध कारोबारी
रुकुम । अवैध लागुऔषध कारोबारीलाई पछ्याउँदै जाँदा छोप्ने क्रममा गोली प्रहार भएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–४ ठाराढुंगामा मंगलबार बेलुका रुकुम पूर्वको प्रहरीले आगुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गर्ने...
मोरङ्ग । मोरङ जिल्लाको रतुवामाई नगरपालिका २ डोरीयास्थित सीमा ईलाकाबाट साउन १४ गते एपीएफ टोलीले लागूऔषधसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । को २ ह २८७३ नम्बरको ट्याम्पुमा आउँदै गरेका उनीहरुलाई सशस्त्र प्र...
मिर्गौला तस्करीको ठूलो सञ्जाल पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले मिर्गौला तस्करीको ठूलो सञ्जालमाथि कारवाही गर्दा वडाध्यक्ष सहित १२ जना पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन व्युरोले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वडाध्यक्ष सहित १२ जना पक्...
एपीएफ टोलीद्वारा लागूऔषध बरामत
सर्लाही । सर्लाही जिल्लाको गोडौटा नगरपालिका १ बहादुरपुर सीमा ईलाकाबाट असार २१ गते एपीएफ टोलीले ५ सय ७० वटा वालरेक्स नामक लागूऔषध बरामद गरेको छ । बेवारिसे अवस्थामा रहेको उक्त लागूऔषध सशस्त्र प्रहरी बल...
१२ दिनमै छुटे बलात्कारका आरोपी
कैलाली । ७ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको आरोप लागेका कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ४ का ८० वर्षीय वृद्ध बालाराम सुवेदी धरौटीमा रिहा भएका छन् । गत जेठ महिनाको ११ गते आफ्नै नतिनीसंगै खेलिरहेकी ...
बारामा एसएसबीको ज्यादती
बारा । बिश्रामपुर गाउँपालिका वडा नं. ४ बलिरामपुरमा नेपाली र भारतीयबीच झडप भएको छ । बिहान भएको झडपमा केही नेपाली घाइते भएका छन् । झडपमा अशोककुमार साह, कमलेश शर्मा, हिरालाल शर्मा, दीपक शर्मा, छोटेलाल स...
सालको गोलिया काठसहित पक्राउ
पर्सा । पर्सागढी नगरपालिका ४ बाट बैशाख २२ गते एपीएफ टोली र वन कार्यालयको कर्मचारीले करीव २८ हजार रुपैयाँ बराबरको सालको गोलिया काठसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोही ठाँउ बस्ने ३२ वर्...
चितवन । राप्ती नगरपालिका १० स्थित कोराकबाट बैशाख २२ गते एपीएफ टोलीले करिव ५३ के.जि. गाँजा बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नम्वर ३ गढिमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरबाट खटिएको एपीएफ टोलीले सो स्...
रौतहट । रौतहट जिल्लाको यमुनामाई गाउँपालिका ३ स्थित राजपुर तुलसीबाट चैत्र ३ गते एपीएफ टोलीले एउटा चाईनिज पेस्तोल तथा सोको एउटा म्याग्जीन, दुई राउण्ड गोली र एउटा कटुवा पेस्तोलसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको...
कपिलवस्तु । कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिका १ स्थित शिवपुरबाट एपीएफ टोलीले चैत्र ३ गते करीब १० लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको चोरीपैठारीको चौपाया बरामद गरेको छ । भारतबाट अवैध रुपले भन्सार छलि नेपालत...